- Filter “Cold catalysis” (Filter အအေးထုတ်ဓါတ်ကူ ပစ္စည်းများ) အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Fiilter ကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် လူကို ဒုက္ခပေးစေသော Formaldehyde ဓါတ်ငွေ့ကို အဆိုပါ Filter ကဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ - Polyphenol Filter (အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ရှားပေးသော (Polyphenol Filter) အဆိုပါ Polyphenol Filter ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အခန်းအတွင်း လေထုထဲရှိ အန္တာရာယ်ဖြစ်စေသော အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။ - Lysozyme filter (ပိုးမွှားများ စစ်ထုတ်ပေးသော Filter) ဆိုးကျိူးဖြစ်စေသော ဘတ်တီးရီးယား နှင့် ပိုးမွှားများကို စုတ်ယူ စစ်ထုတ်ပေးသော Filter ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ Filter ထဲတွင် Anti-Bacterial များ ဖမ်းယူ စစ်ထုတ်သော စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။ - Filter with silver ions ( Silver Ions ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Filter) Silve ions များမှ ရောဂါဖြစ်ပွားသော Antibacterial များ နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိူးပေးနိုင်သော Bacteria များကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးဖယ်ရှားရှင်းလင်း ပေးနိုင်သည်။ - Anion generator (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပေးနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိ) ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပူချိန်အား သင့်တင့်မျှတမှု ရှိစေရန် တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ပေးပြီး နူညံ့သောအထိအတွေ့ကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းမှု ဖြေလျော့ပေးနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ - The photocatalytic filter ( ပိုးမွှားများနှင့်အနံအသက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း) ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့် မကောင်းသော အနံအသက်ဆိုးများကို စုတ်ထုတ်နိုင်သော အစွမ်းရှိသည်။ - Filter with vitamin C (Vitamin C ပါဝင်မှု အကျိူးကျေးဇူးများ) Vitamin C ပါဝင်သောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်သာမက အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများကို သက်သာဖြေလျော့ပေးနိုင်သော စွမ်းအားများ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
Oilless Air Compressor SW70 ; Work Pressure: 0.8MPa Power Supply: 110V~240V, 60Hz~50Hz . Max. Workpressure: 0.8Mpa . The discharge is measured when out pat is at 0.4Mpa Pressure. သေသပ်ခိုင်ခံ့သော၊ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dental Equipments,Products များအား ဝယ်ယူအားပေးလိုသောလူကြီးမင်းများအနေဖြင့် Oral Care Co.,Ltd တွင် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
ယနေ့ခေတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပူနွေးလာမှုကြောင့် လူတော်တော်များများ အပူဒဏ်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ အပူရှိန်မြင့်တတ်လာမှုကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကျန်းမာရေးအရ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံအားများ လျှော့နည်းလာပါတယ်။ အခုလို ခုခံအား လျှော့နည်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကြားခံ ခုခံအားအဖြစ် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးမယ့် GREE Aircon ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးငယ်များအတွက် ရာသီဥတု အပူချိန်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရာလည်းရောက်ပါတယ်။ GREE Aircon သည် ပူလောင်အိုက်စက်တဲ့ အခန်းထဲမှလေတွေကို ဖယ်ရှားပြီး အေးမြလက်ဆတ်သော လေးအေးများကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးတဲ့အတွက် အခန်းထဲသို ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းအတွက် စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ပူနေပေမယ့် အခန်းထဲမှာ အေးချမ်းနေမယ်ဆိုရင် လူကြီးများအတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သည် တရားစာအုပ်ဖက်မယ်၊ တရားနာမယ်၊ တရားအားထုတ်မယ် ဆိုရင်လည်း အခုလိုအေးချမ်းအခန်းထဲမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်တည်ငြိမ်စွားဖြင့် တရားအားထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GREE Aircon သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ပူလောင်မှုကို ကင်းဝေးစေပြီး အေးချမ်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ASIA VINA Desk Fan
Asia Vina Fan များကို ပြင်သစ်နည်းပညာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အကောင်းမွန်ဆုံး ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအတွက် အသုံးပြုသူများစိတ်ချမ်းသာစေမည့် Fan လေးဖြစ်ပါသည်။ Asia Vina Fan များဖြစ်သော ပန်ကာများကို sizeအမျိုး မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး color အရောင်မျိုးစုံရရှိနိုင်သည့်အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရောင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အချိုသာဆုံး၊ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီ၊လက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Asia Vina Electric Full Stand Fan
Asia Vina Fan များကို ပြင်သစ်နည်းပညာနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အကောင်းမွန်ဆုံး ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအတွက် ကြာရှည်အကြမ်းခံပြီး အသုံးပြုသူများစိတ်ချမ်းသာစေမည့် Fan လေးဖြစ်ပါသည်။ Asia Vina Fan များဖြစ်သော ပန်ကာများကို sizeအမျိုး မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး color အရောင်မျိုးစုံရရှိနိုင်သည့်အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရောင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အချိုသာဆုံး၊ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီ၊လက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Floor standing type Commercial AC
SPONDE AC Type တို့သည် Powerစားသုံးမှုနဲပါးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိကာ စွမ်းအင်ချွေတာပေးနိုင်သောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။သာမာန် Air-Con များထက် ပို၍အေးမြသော လေကိုအရပ်လေးမျက်နှာသို့လျင်မြန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီး Air-Con ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Compressor ကို Japanese Branded Compressor များသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တစ်စုံတစ်ရာစက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပါက Digital Display ပေါ်တွင် Error Code No.ဖော်ပြပေးပြီးစက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို မထိခိုက်စေပဲလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသာ အလွယ်တကူအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းအပြင် Auto Restart Function ပါရှိသဖြင့် မီးပျက်ပြီးနောက်မီးပြန်လာလျှင် အလိုအလျောက်ပြန်ပွင့်ခြင်းစသည့် ထူးခြားချက်များစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
FIOOR CEILING Type AC
Sponde Aircon Type များ၏ထူးခြားချက်များမှာ သာမာန် Air-Con များထက် ပို၍အေးမြသော လေကိုအရပ်လေးမျက်နှာသို့လျင်မြန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီး Air-Con ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Compressor ကို Japanese Branded Compressor များသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တစ်စုံတစ်ရာစက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပါက Digital Display ပေါ်တွင် Error Code No.ဖော်ပြပေးပြီးစက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို မထိခိုက်စေပဲလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသာ အလွယ်တကူအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းအပြင် Auto Restart Function ပါရှိသဖြင့် မီးပျက်ပြီးနောက်မီးပြန်လာလျှင် အလိုအလျောက်ပြန်ပွင့်ခြင်းစသည့် ထူးခြားချက်များစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
LED Display - 24-hrs Timer - Auto Restart - Turbo Cooling - Wide &amp; Long Direction - Gold Fin SPONDE Air-Con ၏ထူးခြားချက်များမှာသာမာန် Air-Con များထက်ပို၍အေးမြသော လေကိုအရပ်လေးမျက်နှာသို့လျင်မြန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီး Air-Con ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Compressor ကို Japanese Branded Compressor များသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တစ်စုံတစ်ရာစက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပါက Digital Display ပေါ်တွင် Error Code No.ဖော်ပြပေးပြီးစက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို မထိခိုက်စေပဲလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသာ အလွယ်တကူအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းအပြင် Auto Restart Function ပါရှိသဖြင့် မီးပျက်ပြီးနောက် မီးပြန်လာလျှင် အလိုအလျောက်ပြန်ပွင့်ခြင်းစသည့် ထူးခြားချက်များစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
Sponde AC များသည်သာမာန် Air-Con များထက် ပို၍အေးမြသော လေကိုအရပ်လေးမျက်နှာသို့လျင်မြန်စွာပေးစွမ်းနိုင်ပြီး Air-Con ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Compressor ကို Japanese Branded Compressor များသာ အသုံးပြုထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။တစ်စုံတစ်ရာစက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပါက Digital Display ပေါ်တွင် Error Code No.ဖော်ပြပေးပြီးစက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို မထိခိုက်စေပဲလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသာ အလွယ်တကူအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းအပြင် Auto Restart Function ပါရှိသဖြင့် မီးပျက်ပြီးနောက်မီးပြန်လာလျှင် အလိုအလျောက်ပြန်ပွင့်ခြင်းစသည့် ထူးခြားချက်များစွာပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
VDF Temperature Digtial Display. International Famous Janpanese Compressor Like: Toshiba, Hitachi, Sanyo, Matsushita, Mitsubishi ETC.High Efficiency Hydrophilic Heat Exchanger. Intelligent Control with Automatic Self-diagnose, Quite Operation and Sleep Mode. Model Design with Washable Filter.
အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်မယ့် Couple fan လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အိတ်ထဲ ခေါက်ထည့်ကာ အလွယ်တကူ သယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1200 mA batter လေး ပါဝင်ကာ အားသွင်း အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ ပါဝင်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ကြိုးတန်းလန်းနဲ. ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး အားသွင်းဖို. USB အပေါက်လည်း ပါဝင်တယ်နော်။ ဈေးနှုန်း - 12000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09768484878 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...